Donald Trump oo sheegay in ilaalada Hillary Clinton ay hubka dhigaan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldDonald Trump oo sheegay in ilaalada Hillary Clinton ay hubka dhigaan
September 17, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Murashaxa madaxweynaha xisbiga Jamhuuriga, Donald Tump. Sawirka: Bloomberg.
Washington-(Puntland Mirror) Murashaxa madaxweynaha xisbiga Jamhuuriga Maraykanka Donald Trump ayaa wajahaya cambaarayn kadib markii u soo jeediyay mar labaad wax u muuqda khaarajinta haweenayda la tartamaysa ee Hillary Clinton oo murashax madaxweynaha u ah xisbiga Dimuqraadiga.
Mr Trump ayaa soo jeediyay in ilaalada Hillary Clinton ay dhigaan hubkooda dabadeedna hala arkee waxa iyada ku dhaca.
Isaga oo ka hadlayay isku-soo-bax ka dhacay Miami shalay oo Jimce ahayd, murashaxa Jamhuuriga ayaa si caadi ah u yiri: “Waxaan u malayn wardiyeyaasheeda in ay hubka dhigaan. Waa in ay hubka iska dhigaan, hadda,”.
“Hubka ha laga qaado waxay dooneysaa (Hillary) in ay idnka hubka dastuurku idiin oggol yahay idin ka qaado iyaduna ay haysato oo isku ilaaliso, bal hubka iyada halaga qaado waxaa imaanaya khatar aad u weyn markaas,” ayuu yiri Trump.
Hillary Clinton ayaa ku baaqday in la adkeeyo kantaroolka hubka. Xisbiga Dimuqraadiga oo ay Hillary kamidtahay ayaa dhowr jeer isku dayay in hubka shacabka gacantiisa ku jira la xakameeyo, balse Jamhuuriga ayaa kasoo horjeestay.
Maraykanka ayaa sharci ahaan loo ogolyahay dadka shacabka ah in ay ku haystaan guryahooda hubka fudud sida qoryaha iyo baastooladaha.
July 20, 2016 Xisbiga Jamhuuriga oo Donald Trump u doortay musharaxa madaxweynaha Maraykanka
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasaarada maaliyada dowladda Puntland ayaa maanta oo Talaado ah baarlamaanka hor geysay miisaaniyada sanadka soo socda ee 2017-ka. Dhaqaale dhan $160, 5600,648 ayay wasaaraddu maaliyadu horgeysay baarlamaanka, iyaga oo ka doodi doona maalmaha [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Bini’aadamka kaliya maahan cida la halgamaysa abaarta daran ee ka jirta gobolada Puntland, waxay saameysay xayawaanka duur joogta ah sida daanyeerka. Cabdidaahir Cumar waa nin reer miyi ah, oo kunool tuulada Ilmo-adeer ee [...]